DEG DEG:- Puntland oo Dadkii ugu badnaa Xabsiga dhigtay & Tirada dhabta ah …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DEG DEG:- Puntland oo Dadkii ugu badnaa Xabsiga dhigtay & Tirada dhabta ah ….
DEG DEG:- Puntland oo Dadkii ugu badnaa Xabsiga dhigtay & Tirada dhabta ah ….
Dowladda Puntland ayaa dad u xir xirtay Dabkii dhimashada badan dhaliyay ee maalintii shalay ka kacay kaalin shidaal oo kutaalay magaalada Garowe, kaasoo geystay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed.
Duqa degmada Garowe oo shir jaraa’id weriyayaasha ugu qabtay Garowe, ayaa sheegay inay dowladda Puntland wado baaritaan ku aadan sidii uu ku kacay dabkaan iyo cida ka dambeysay.
Xasan Goodir wuxuu Puntlandfm.com sheegay inaysan ka hor dhacayn baaritaanka ay hay’addaha amniga dowladda wado iyo dadka loo xiray falkaan, hase yeeshee wuxuu intaa ku daray inay dowladdu qaaday dhaawacyo garaab ah oo loo qaaday magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay guddoomiyuhu in tirada dhimashada ay dowladdu hayso inay marayso illaa afar qof oo shacab ah. Waxaa kale oo dhaawac ah afar qof ay xaaladooda aad uy liidato, kuwaas oo uu sheegay inay dowladda Puntland uduulisay magaalada Muqdisho.